!! #မလေးရှားတွင် မြန်မာတစ်ဦး #လည်စဉ်းအသတ်ခံရပြန် #မလေးရှား နိုင်ငံ #Butterworth ရှိ #Tasek Gelugor, Jarak Atas | democracy for burma
!! #မလေးရှားတွင် မြန်မာတစ်ဦး #လည်စဉ်းအသတ်ခံရပြန် #မလေးရှား နိုင်ငံ #Butterworth ရှိ #Tasek Gelugor, Jarak Atas
tags: 20 th.KILLED, ရှိ Tasek Gelugor, လည်စဉ်းအသတ်ခံရပြန်, Buddhists, Burma, burmese killed, Butterworth, malaysia, Myanmar
မလေးရှားတွင် မြန်မာတစ်ဦး လည်စဉ်းအသတ်ခံရပြန်
မလေးရှား နိုင်ငံ Butterworth ရှိ Tasek Gelugor, Jarak Atas,ဒေသ ရှိ ဆီအုန်းခြံတွင် ဟိန်းလတ်ကျော် ဆိုသူ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် မြန် တစ်ဦးသည် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လည်စဉ်းအသတ်ခံရလျှက် သေဆုံးနေသည်ဟု တွေ့ရှိရကြောင်း စတား သတင်းတွင် ယနေ့ဖော်ပြပါရှိပါသည်
မလေးရှားတွင် ယခုနှစ်အတွင် ဟိန်းလတ်ကျော်ဆိုသူ အပါအဝင် မြန်မာ ၂၀ ဦး အသတ် ခံရပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၊ အခြား ဖြစ်စဉ် ၁၈ ဦးနှင့် ဆက်နွယ်မူ့ရှိမည် မထင်ကြောင်း ပီနန်း CID ဒုတိယ ဦးစီးမူး Mazlan Kesah ကပြောကြားပါသည်။
သေဆုံးသူသည် Taman Kelasah, Seberang Jaya ဒေသရှိ စက်ရုံမှ လုပ်သားဖြစ်ပြိး လွန်ခဲ့သော ၂၄ အတွင်းက အခြား တစ်နေရာရာတွင် သတ်ဖြတ်ခံရပြီး စွန့်ပစ်ခြင်း ခံရသည်ဟု ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ဝမ်းဗိုက် ၊ တင်ပါး နှင့် ဘယ်ဖက် လက်ကောက်ဝတ်တို့တွင် ဓါးဒဏ်ရာ တွေ့ရကြောင်း ပြစ်မူ့ကျူးလွန်သူမှာ တစ်ဦးမက ဖြစ်နိုင်ကြောင်း Mazlan Kesah ကပြောကြားပါသည်။
အလောင်း အနီးတွင် တွေ့ရှိရသော ဓါးရှိလက်ဗွေရာ စစ်ဆေးရန် ယူဆောင်ထားသည်ကိုလည်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
Tuangpu Siyin http://www.thestar.com.my/…/Another-body-found-with-throat…/
← #crime #ลอบวางระเบิด #ทหารพรานเจ็บ 1 @ อ. #ยะรัง จ. #ปัตตานี
#BURMA #national #found with his #throat #slit -making him the #20th #Myanmar #murdered in #Malysia this year. →